Seho miavaka : Mpanakanto malazan’ny « Tanà in love » i Noely Kely -
AccueilVaovao SamihafaSeho miavaka : Mpanakanto malazan’ny « Tanà in love » i Noely Kely
Seho miavaka : Mpanakanto malazan’ny « Tanà in love » i Noely Kely
31/07/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tafita ny hafatra. Natolotry ny mpikarakara ho tsiaro an’ireo mpanakanto efa nodimandry sy ho fanasohasoana an’ireo mbola velona ny hetsika « Tanà in love », notanterahina omaly tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina. Mpanakanto malazan’ny «Tanà in love » i Noely kely, mpikambana tao amin’ny tarika Sakelidalana. Saika nahazo tehaka hatrany tamin’ireo mpijery maro tonga teny an-toerana izy isaky ny miaka-tsehatra. Saika nandraisany anjara avokoa ireo lohahevitra sy gadona samihafa nentina tamin’ity fampisehoana ity fa anisan’ny nanaitra ny maro ny ampahan-kira tamin’ny gadona ankehitriny «Taniah » an’i Rak Roots, narahin’ireo hira « boysband » sy « girlsband ». Narahina tolotra somary hatsikana noho ny halavany tamin’ilay hira « Malaika » ka niarahany nikalo tamin’i Iary ka nahafaly ny mpijery tamin’ny ilay fehezanteny hoe « Maty aho mama hay sipa lava be ». Nampihetsi-po ihany koa avy eo ny niangaliany ilay hiran’ny tarika Mahaleo « Jamba » izay nanambarany tamin’ireo mpijery ny fahavoazany ara-pahasalamana amin’izao fotoana izao.
Tetsy ankilan’izay, nasongadin’izy 21 mianadahy niaraka tamin’ireo mpitendry, ny karazan-kira samihafa nandalo ny vanim-potoana samihafa ary nahitana taratra ny fivoaran’ireo gadona ireny. Nahazo ny ampaham-potoanany avokoa na ny Kaïamba hatrany amin’ny Rock, nandalo ny hira tsotra, ny bà gasy, ny vazo an-gitara… ary noelanelanin’ny rap sy slam niangalian’i Caylah sy Bolo. Nampiavaka ny hetsika ny fiovan’ny fitafian’ireto mpanakanto ireto isaky ny karazan-kira ary valizy sy sakaosy am-polony no nameno ny efitrano fisoaloana akanjo.
Tsikaritra fa nahitana ireo sokajin-taona rehetra ny mpijery, ary somary variana tamin’ny fampisehoana noho ny ankamaroan’ny hira tsy dia nampoizina loatra, ka saika amin’ny fiafaran’ny tolotra vao maneho fankasitrahana ny mpijery.
Mpandraharaha Afrikana Tatsimo : Vonona hampiasa ny volany eto Madagasikara
Fahombiazana. Nofaranana tamin’ny fanaovan-tsonia ny antontan-taratasy mirakitra ny fahavononan’ny governemanta roa tonta eo amin’ny fiaraha-miasa ny fihaonamben’ny mpampiasa vola ho an’i Madagasikara, notanterahina tatsy Afrika Atsimo nandritra ny roa andro. Roa andro izay nanaovana atrikasa ...Tohiny
Depiote 73 : Hanangon-tsonia hanesorana ireo minisitra HVM
Ravalomanana/Rajoelina : Nodorana velona ny zana-bahoaka
Filoha Hery Rajaonarimampianina : « Maro ny tetikasa notohanan’ny Frankofonia teto »
Rajaonarimampianina:“MILA IAINANA NY FAMPIHAVANAM-PIRENENA”